Ku darso AfricArXiv - AfricArXiv
Taageer rugta dib u dejinta ee AfricanArXiv iyo dadka gadaal ka daawanaya. Si loo joogteeyo adeegyada loo yaqaan 'AfricanArXiv', in la daryeelo oo la kobciyo bulshada iyo buundada, waxaan siinnaa shaqsiyaad iyo sidoo kale hay'adaha qaabab soo socda si ay dhaqaale ugu biiriyaan shaqadeena.
Kharashaadkayaga waxaa ka mid ah:
dhisida iyo dayactirka mashiinka AfricanArXiv
khidmadaha adeegga (marti gelinta websaydhka iyo iskaashiyada kale ee adeegga sida ORCID, OSF,…)
safarka iyo soo bandhigida shirarka - incl. kharashyada la xiriira Visa iyo hoyga
Dhammaan tabarucyada maaliyadeed ee aan helno waxaa loo isticmaali doonaa mid ama in ka badan oo ujeeddooyinka aan kor ku soo sheegnay. Si aad ugala hadasho waxa saxda ah ee lacagtaadu ku biirinayso fadlan nagala soo xiriir at info@africarxiv.org.
U dir tabaruc dhaqaale M-Pesa ilaa + 254 (0) 716291963
via Liberapay waad ku taageeri kartaa shaqadeena tabaruc soo noqnoqda. Lacag bixintu waxay ku imaaneysaa iyadoo aan xarig ku xirneyn oo tabarucyada waxaa lagu xardhay € 100.00 usbuuciiba si deeqbixiyeyaashu ay u yareyaan saameyn aan caadi aheyn.
Read more at liberapay.com/about/